महानायिका प्रियंका कार्कीजीलाइ खुल्ला पत्र ! – नेपालि भिडियो ब्लग, पहिलो र एक मात्र
हजुरको बिहेमा हजुर त स्वर्गबाट झर्नु भएको अप्सरा झैँ देखिनु भाको थियो:
हजुरले आफ्नो पढाइ सकाउनु भएर, अमेरिकामा नै आफ्नो करियेर आगाडी सुरु गर्न थाल्नु भयो । म पनि काम गर्दै, मास्टर्स गर्न थाले । उही त् होनी विदेशमा बस्ने बिद्यार्थीहरुको हाल ।
एक दिन साझामा बिचित्रको घटना घट्यो । एक जना साझाका नयाँ केटि मित्रले (मलाइ लाग्छ उनि हजुरलाई नजिक बाट चिन्ने साथि हुन् पर्छ ।) हजुरको एक अमेरिकन हलिवुड डिरेक्टरसंग प्रेम अफ्येर चलिरहेको छ भनेर नयाँ पोस्ट निकालिन । मलाइ त् पत्याउन नै गारो भो । उनले हजुर र त्यो डिरेक्टरको फोटोहरु पनि राखेकी थियिन । उहाँको अनुसार हजुरको अफयेरको बारे हजुरको सबै साथीहरुलाइ थाहा थियो रे । एस्तो कुरा सुनेर म सार्है चिन्तित भएँ । मैले उ नानीसंग धेरै कुरा उकाले । साझामा ठुलो कन्ट्रोभर्शी भयो । सबले हजुरलाई नाना थरि लेख्न थाले । यो कुरा शायेद हाम्रा अमेरिकन डिरेक्टरले पनि थाहा पाउनु भयो । उहाले आफ्नो फेसबुक बाट सबै कुरा खुलस्त पार्नु भयो । मलाई त् सार्है नमज्जा लागेको थियो प्रियंकाजी । उहाको अनुसार हजुरको बैवाहिक जीवनमा अलिक खट-पट शुरु भएको बेलामा उहाँ को मिलन, कामको शिलशिलामा, हजुरसँग भएको प्रस्ट्याउनु भो । तेही सिलसिलामा उहाँको तर्फ बाट चै एकतर्फी प्रेम भएको कुरा उहाले मेरो समक्ष स्विकार्नु भो । मैले उहाको भावानाको धेरै कदर गरे । नगरम पनि कसरि नगरम । मेरो र उहाको एकतर्फी कथा उस्तै उस्तै थियो । हजुर को मन्त्रमुग्ध रुप, चरित्र र कला प्रतिको चै ओत-प्रोत् नहोस् र ? उहाँ त् धेरै भाग्यमानी नै हुनुहुन्छ । केहि समय भएपनि उहाले हजुरको जीवनको गारो क्षणमा हजुरलाई साथ् दिने मौका पाउनु भो । शायद त्यो क्षणिक साथमा हजुर पनि रमाउनु भो होला । तर म अभागी । खैर ।
साझामा यो कन्ट्रोभर्शीले नया रुप् लिसकेको थियो । मेरो परममित्र "यो त् भए न नि सोम" ले एस्लाई "लसुन प्रकरण"को संज्ञा दिइसकेको थियो । यसै सिलसिलामा हजुर र मेरो साझामा पहिलो पटक कुरो भो । हजुरले मलाइ सबै कुरा राम्ररी बुझाउनु भो । हजुरले भन्नु भाको कुरो मेरो दिमागमा अहिले सम्म ताजा छ । "नाज, म उहालाइ मात्र (नेपालि नगरिकज्यु) धेरै माया गर्छु । उहाँ संग म भविस्य बिताउनु चहान्छु र उहाँ संग "फेयेरी टेल" लाइफ बिताउन चाहान्छु ।" यो कुरा सबै सुने पछि मैले त्यो "लसुन प्रकरण"को धागो साझाबाट हटाई मागे । प्रियंकाजी हजुर धेरै खुसि हुनु भाको थियो त्यो दिन । हजुरको खुसि देख्दा म कति धेरै खुसि भाको थिए । शायेद तेही नै हजुरको साझामा अन्तिम भेट थियो ।
हजुर नेपालमा फर्किनु भाको रहेछ उहासंग । मैले यूट्युबमा हजुर र नेपाली नागरिकजिउको हिमालयन टि.भीको "जीवन साथि" भन्ने शृंखलामा अन्तर्वार्ता हेरेको थिए । तपाईहरु प्रेम बन्धनमा लिप्त भएको दृश्य, अनि उहाको छेउमा हजुर मस्कि मस्कि हांसी अन्तर्वार्ता दिएको हेर्दा, न ढाँटिकन भन्छु, म पनि मस्सक्क परि हाँसेको थिए ।
हजुरको अरु अन्तर्वार्तामा मैले हजुरको यौन जिन्दगीको बारेमा नि पढ्न पाए । हजुर म जस्तै धेरै नै यौनिक हुनु हुँदो रहेछ । म पनि यौनमा गहिरो रुचि भएको मान्छे हो । तर हजुर त् म भन्दा नि सोह्र आना बढी हुनुहुँदो रहेछ । हि हि । हजुरको कामको व्यस्तताले गर्दा धेरै लामो अवधि सम्म यौन नहुने अनि जब हजुरको उहासंग मिलन हुन्थ्यो हजुरले त् बा बा ….. धत् मलाइ त् लाज नै लाग्छ, भिज्वलाइज गर्न नि । हि हि । अनि हजुर को रुचि पनि अरु केटिहरुको जस्तो छैन रहेछ । हजुरलाई बेडमा नभई क्लाजेट अनि दाइनिङ्ग टेबलमा यौन गर्न रुचाउने कुरो मलाई सारै मज्जा लाग्यो । मलाइ त् एस्तो कुरा सम्झंदै सारै खप्न नसक्ने गारो हुन्छ नि प्रियंकाजी । हि हि । हजुरलाइ "परम्परागत" पोजिसन मन पर्दो रहेछ हगि । आफु माथि हुने पोजिसनमा ज्यादा एक्सर्साइज गर्न पर्ने हुनाले अरु पोजिसन इन्जोई गर्न सक्न हुन्न भन्नु भो । तर मेरो बिचारमा केटिहरुले परम्परागत भन्दा नि आफु माथि हुने पोजिसन नै उपयोग गरेको खण्डमा, सेक्सर्साइज गरि आफ्नो बोसो पनि घट्ने र यौन को उत्तिकै आनन्द लिन सक्ने कुरा हजुर समक्ष राख्न चाहन्छु । जे होस् हजुर को बोल्ड र फ्रांक नेचर देखि ज्यादै प्रसन्न भएको थिए । हजुर कति खुला र स्वच्छ प्रविर्तीकि कला र रुपको खानि हुनुहुन्छ । साँचीनै हजुर हाम्री दिलको रानी हुनुहुन्छ ।
तर एस्तो राम्रो बैवाहिक जीवनमा पनि त्यो कालो रात छाही हाल्यो । मैले कहिले पनि नचिताएको कुरा सुन्न पर्यो । हजुर र उहाको सम्बन्धले अरुनै मोड लियो रे । यो कुरा मैले बिस्वासनै गर्न सकेन । हजुर को बिवाहको फोटोहरु फेरी एक चोटी पुन: मैले हेरे । हजुरको सम्बन्ध बिच्छेद किन, के कारण भयो मलाई बुझ्न मन लाग्यो । हुन त् हजुरको पर्सनल लाइफ हो । तर पनि हजुर एउटा महानायिका भए पछि, हामी जस्तो, हजुरको कला र रुपको, थुप्रै प्रेमीहरु, हजुर को हरेक कुरा जान्न धेरै आतुर हुन्छौ । मैले धेरै पत्रिकाहरु पल्टाए तर हजुरको सम्बन्ध के कारणले बिछोड भएको कुरा पत्ता लगाउन सकेन । मलाइ लाग्छ जे भए पनि हजुरहरुको प्रेम साँचो थियो । बैवाहिक जीवनमा नबाधिए पनि, हजुरहरुको मनमा एक अर्का प्रति माया र श्रद्धा सधै रही रहने छ भन्ने कुराको म बिस्वस्त छु ।
यसै अन्तराल बीच, हजुरले धेरै नेपाली सुपर हिट फिल्महरु खेली सक्नु भएको थियो । हजुरको नामले नेपालमा र अमेरिकामा मात्र सिमित नभई इन्टरनेसनल जगतमै ख्याती प्राप्त गरिसक्नु भए छ । दुबाई, कतार, बेहरण, अबु-धाबी, मलेसिया, इन्डोनेसियामा हजुरको करोडौ प्रेमीहरुको जमात छन् । तेस्तो प्रेमीहरुको माँझ मेरो अस्तित्व गुमिसकेको हो कि भन्ने कुरोले मलाई कहिले काही धेरै नै पिरोल्ने गर्थ्यो हजुर । रिसानी माफ तर मैले अहिले सम्म हजुरको कुनै फिल्म अमेरिकामा हेर्न पाएको छुइन । तर पनि हजुरको सुपर हिट फिल्म झोले, भिजिलान्ते, ३ लभर्स, कलिवुड जस्ता फिल्महरु कसैले यूट्युबमा अपलोड गरिदेवस भन्ने आशा राखी बसेको छु । तर हजुरको मिउजिक भिडिओहरु चै यूट्युबमा धेरै हेरेको छु । तेस मध्ये हजुर तलको भिडियोमा सारै नै राम्री देख्नु भाको छ मेरी प्यारी प्रियंका जी । यो गितले मेरो मनको कुरो पनि ठ्याकै गरेको छ भन्या ।।
पत्र लेख्छु भनेको त, उपन्यासनै पो हुन् जस्तो लाग्यो । मन मा धेरै कुराहरु छन् तर म अब शृंखलाबृद्ध तरिकाले येही धागो मार्फत हजुर समक्ष्य मेरा मनका भावनाहरु पोख्न चाहन्छु । सायेद कुनै दिन हजुरले म तोर्पेको यो पत्र पढ्नु हुनेछ भन्ने आशा मात्र राख्न सक्छु । अन्त्यमा हजुरलाइ मेरो अपार माया, र मोह । हजुरको प्रगतिले गगन चुमुंन । येही कामनाका साथ्, हजुरको मिठो सम्झना संगै यो पत्र टुंग्याउने अनुमति चाहन्छु ।
This entry was posted in Artists, चलचित्र and tagged प्रियंका कार्की, Priyanka Karki, Rochak Mainali. Bookmark the permalink.
← हामीले उठाएको कुरा लागु हुने भएछ, नोटमा केरमेट र स्टिज लगाउन नपाइने
नेपालले टी-ट्वान्टी क्रिकेट खेल्ने पाउने भयो →